सुनको मूल्य तोलको रु. ७५ हजार ५०० – Maitri News
सुनको मूल्य तोलको रु. ७५ हजार ५००
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । शुक्रबार रु ७४ हजार ५०० मा कारोबार भएको छापावाला सुन साताको पहिलो दिन आज बजार खुल्ने बित्तिकै एक हजारले वृद्धिभई तोलामा रु ७५ हजार ५०० कायम भएको छ ।
Previous Previous post: निजगढ–भरतपुर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर सम्झौता
Next Next post: परियत्ति शिक्षाका लागि काठमाडौँ महानगरबाट २३ लाखको अनुदान